1-da Ogoosto oo maanta maamuus weyn loogu sameeyey Garowe (Taswiir). – Radio Daljir
Garowe, Aug 01 ? Munaasabad aad u ballaaran oo lagu maamuusayo 13 sano guuradii ka soo wareegtay dhismihii maamulka Puntland ayaa maanta ka dhacday magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland taasoo lagu dhigay goob fagaare ah oo ay dadweyne badani ka qayb-galeen.
1-dii Agoosto 1998-dii maanta oo kale ayey ahayd markii la dhistay maamulka Puntland, waxaana maanta loo dabaal-degay 13 jirsiga Puntland.
Maamuuskii ugu weynaa ee abid loo sameeyo dhalashadii Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland iyadoo xafladda ugu weyni ay ka dhacday fagaaraha barxadda loo yaqaanno ee bartamaha magaalada, taasoo kumanaan dadweyne ahi ay ka qayb-galeen.
Maamuusidda maalintaasi darteed aqal kumeel gaar ah ayaa laga dhisay goobtaasi fagaaraha ah kaasoo lagu xardhay hal-ku-dhigyo kala duwan oo ka turjumaya munaasabdda 1-da Agoosto, lagana lulay Calanka Puntland, midkii Soomaaliya iyo astaamaha qaran ee dalka, halkaasi oo ah meesha madaxda Puntland iyo dadka kale xafladda lagu marti-qaaday ay shacabka kala hadleen.
Tobanaan cutub oo iskugu jira, shaqaalaha wasaaradaha dawladda, ardayda iskuullada, kuwa jaamacadaha, hooyooyinka, dadka barakacayaasha ah iy qaar kale ayaa socod ku maray wajiga hore ee halka ay fadhiyaan madaxda Puntland ee xilligaani , dadkaasi oo watay boorar kala duwan oo ay ku sharraxnaayeen goobaha iyo ururrada ay ka kala tirsan yihiin.
Sidoo kale ciidamada qalabka sida ayaa iyana socod lug ah ku maray isla halkaasi kuwaasi oo ay salaan sharaf ka qaateen madaxda dawladda oo taagni ku saloolnaa inta socodka lugta ah lagu guda jiray.
Koox-fardoolay ah ayaa iyana munaasabadda ka qayb-galay kuna yeeshay kaalin lixaad leh gaar ahaan fantasiyo-fardeed, iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo aad u kala gaddisanaa.
Munaasabdda ka dhacday magaalada Garoowe, ayna ka qayb-galayaan madaxa qaranku, waxaa laga soo jeediyeya khudbado taariikhi ay oo lagu muujinayo waayihiii kala duwanaa ee Puntland, iyadoo madaxda xilligaanna ay si gaar ah u iftiimiyeen wax-qabadkoodii muddoo labada sano barka ahayd ee ay waddanka xukumayeen.
Dhinaca kale gobollada kala duwan ee Puntland ayuusan ka jirin dareen dabaal-deg oo midkaan la mid ah ama saaweeya, oo lagu waynaynayo maalintii asaaskii Puntland ee 1-da Agoosto, marka laga reebo xaflado yaryar oo oo maamullada dawladaha hoose ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland ay qabteen.
Qaar ka mid ah bulshada gobollada Puntland ee aan maamuuska weyn laga samayn ayaa ku doodaya in loo baahnaa si siman dhammaanba deegaannada Puntland looga wada hirgaliyo xuska maalintaani, madaxda dawladduna ay isku kala qaybiyaan tagidda iyo ka qayb-galidda xafladaha kala duwan ee gobollada, halka haatan madaxdii dawladda oo dhammi ay ku wada suganaayeen xaflada ka dhacday magaalo madaxda Puntland ee Garoowe.
Habeennimada caawa ahna waxaa lagu wadaa aqalka madaxtooyada ee magaalada Garoowe in lagu qabto xalad middaasi la mid ah oo ay ka qayb-gali doonaan madaxda dawladda, aqoonyahanno, issimada dhaqanka Puntland, culimo aw-diin, wax-ku-oolka haweenka Puntland, abwaanno iyo indheer-garad kaleeto oo aad ku tiro badan.